Clash of Clans Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Clan ၏တိုက်ပွဲဖြစ်
Clan APK ကို၏တိုက်ပွဲဖြစ်
သငျသညျ, သင့်ရွာကိုတည်ဆောက်မယ့်မျိုးနွယ်စုမြှင့်ခြင်း, မော်ကွန်း Clan ရဲ့စစ်ပွဲများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်အဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာ Join!
Mustachioed Barbarians, Wizards ရှည်များကိုင်ဆောင်ထားမီးနှင့်အခြားထူးခြားသောတပ်များသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်! တိုက်ပွဲများလောကီသားတို့သည်အ Enter!
●သင့် Town Hall ကပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ရှိသည်ဖို့အားလုံးအသစ်က Town Hall 12 ဖို့ Upgrade!
●ကာကွယ်ရေး၏အပြင်းထန်ဆုံးမှတဆင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ Siege စက်များ၏တန်ခိုးကိုသုံးပါ
●တန်ဖိုးရှိသောကို Magic ပစ္စည်းများဝင်ငွေ Clan ရဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲ၌သင်တို့၏အဆွေအမျိုးနှင့်အတူအလုပျ
●သူချင်းကစားသမားသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်စတင်ဖိတ်ခေါ်မိတ်ဆွေတစ်ဦး Clan ရဲ့ Join ။
●ကမ္ဘာအနှံ့ကတခြားကစားသမားဆန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ် Clan ရဲ့စစ်ပွဲများအတွက် Fight ။
●အမြောက်များ, ဗုံး, ထောင်ချောက်, မော်တာ, နှင့်နံရံ၏လူအစုအဝေးနှင့်အတူသင်၏ရွာကိုခုခံကာကွယ်။
●ဘုံမှတဆင့်တစ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်မှင်စာဘုရင်ကဆန့်ကျင် Fight ။
စာလုံးပေါင်း, တပ်များနှင့်သူရဲကောင်းများ၏မရေမတွက်နိုင်သောပေါင်းစပ်နှင့်အတူ● Plan ကိုထူးခြားတဲ့စစ်တိုက်မဟာဗျူဟာ!
● Friendly စိန်ခေါ်မှုများ, Friendly စစ်ပွဲများနှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များ။
အဆိုပါ Builder အခြေစိုက်စခန်းမှ●ခရီးနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကမ္ဘာကြီးကိုအသစ်အဆောက်အဦးများနှင့်ဇာတ်ကောင်တွေ့ရှ။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! Clan ၏တိုက်ပွဲဖြစ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့ဂိမ်းပစ္စည်းများလည်းအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်အသုံးပြုချင်ကြဘူးဆိုရငျ, သင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ setting တွင် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable ပေးပါ။ ဒါ့အပြင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင်, သင် Clan ၏တိုက်ပွဲများ play သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အနည်းဆုံးအသက် 13 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ရမည်။
ပံ့ပိုးမှု: ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်, သင်ပြဿနာများရှိခြင်းနေကြသနည်း http://supercell.helpshift.com/a/clash-of-clans/ သွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ် http://supr.cl/ClashForum သို့မဟုတ်က Settings> အကူအညီနှင့်ပံ့ပိုးမှုသွားသဖြင့်ဒီဂိမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: http://www.supercell.net/terms-of-service/
နွေရာသီ update ကိုကဒီမှာပါ!
• Builder ခန်းမ9ချော်ရည်ဖွင့်တင်, မွေးမြူစက်မဲ့လေယာဉ်များနှင့်တစ်ဦးအပိုဆောင်း Builder ရဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူရောက်ရှိလာခဲ့ခဲ့သည်!
•နယူးအလေ့အကျင့် Mode ကိုကျွမ်းကျင်မှုသစ်မူလစာမျက်နှာကျေးရွာအကြောင်းအရာနှင့်ပိုပြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းပေါ်တက်နိန်များအတွက်!
110.14 ကို MB